Naì Ɔyɛ Kɔwensani, Naì Ɔtɔn Nnubɔne | Bible Tumi Sesa Nnipa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
ƐYƐƐ dɛn na ɔbarima bi a ɔfaa amanehunu bebree mu wɔ ne mmofraberem tumi nyaa anigye, na otumi bɛyɛɛ okunu pa ne agya pa? Dɛn na ɛkaa ɔbea bi a na ɔyɛ nneɛma bɔne pii ma otumi sesaa ne suban? Kenkan saa nnipa yi anom asɛm.
“Metee Nka sɛ Meyɛ Ɔsansani.”—VÍCTOR HUGO HERRERA
AFE A WƆWOO NO: 1974
ƆMAN A OFI MU: CHILE
TEBEA A NA ƆWOM: NÁ ƆYƐ KƆWENSANI
Wɔwoo me wɔ Angol kurowdua mu; ɛwɔ Chile anafo fam a ɛhɔ yɛ fɛ no. Manhu me papa da. Bere a midii mfe abiɛsa no, me maame tu kɔtenaa ɔman no ahenkurow Santiago, na ɔde me ne me nuabarima kaa ne ho kɔe. Yekonyaa mantwea baabi tenae wɔ adedamfikyifo atenae bi. Na tiafi nni hɔ, enti gye sɛ yɛkɔ abɔnten. Baabi a adumgyafo twe nsu no, ɛhɔ na na yɛsaw nsu.
Yɛtenaa hɔ bɛyɛ mfe abien, na aban maa yɛn fie ketewa bi tenaa mu. Nea ɛhaw adwene ne sɛ, nnubɔnenom ne nsawe, nsɛmmɔnedi ne tuutuusi na na ahyɛ hɔ ma.
Da bi, me maame hyiaa ɔbarima bi, na ekowiee aware. Ná me papa no yɛ kɔwensani papa. Ná ɔboro me ne me maame nyinaa. Ná metaa kɔhyɛ baabi su. Minyae a anka mewɔ papa a obegye me afi ne nsam.
Ɛwom, me maame yɛɛ adwumaden de hwɛɛ yɛn, nanso na yɛyɛ ahiafo paa. Sɛ ɔkɔm de yɛn a, ɛtɔ da bi a nea na ɛwɔ hɔ a yebenya adi ara ne milk-pawda ne asikre. Ade a na yɛde gyigye yɛn ani ne TV. Ɛno mpo gye sɛ me ne me nua no wia yɛn ho kɔtetɛw obi mpomma akyi hwɛ bi. Ɛda bi de, ɔkyeree yɛn, enti yɛantumi ankɔhwɛ bio.
Nnakoro nnakoro bi a me papa no ani so bɛda hɔ no de, na otumi tɔ biribi ma me ne me nua no di. Ɛda bi mpo de, ɔtɔɔ TV ketewa bi maa yɛn. Mmere kakra a m’ani gyei no bi ne saa da no.
Midii mfe 12 no, misuaa akenkan. Afe biako akyi no, migyaee sukuu kɔyɛɛ adwuma. Mepɔn adwuma a, na me ne m’adwumayɛfo a wɔanyinyin sen me no bi kɔ apontow kɔwe nsa bow na yɛasan anom nnubɔne aka ho. Ankyɛ koraa na ne nom kaa me hɔ.
Bere a midii mfe 20 no, mihyiaa Cati; nea ekosii ara ne sɛ yɛwaree. Ahyɛase no, biribiara kɔɔ so kama, nanso mesan kɔɔ ɔbrakyew a na mewom dedaw no ho. Afei de, mesɛee koraa. Mehwɛ nea ɛrekɔ so no a, afei na ɛresisi me so sɛ, sɛ manna mu a ɛde me bɛkɔ owu mu. Nea ɛsɛee asɛm no koraa ne sɛ, amanehunu a mefaa mu me mmofraberem no, ɛno ara bi na na mede me babarima Víctor nso refa mu. Me werɛ howee; me bo fuw me ho na metee nka sɛ meyɛ ɔsansani.
Bɛyɛ afe 2001 mu no, Yehowa Adansefo baa yɛn fie, na Cati penee so ma wɔne no fii Bible adesua ase. Ɔkaa nea na ɔresua no ho asɛm kyerɛɛ me. Mepɛe sɛ mihu nea ɛwom, enti me nso mifii ase suaa Bible. Cati bɔɔ asu bɛyɛɛ Yehowa Dansefo afe 2003 mu.
Ɛda bi, mekenkan Rut 2:12, na ɛkyerɛɛ me sɛ Yehowa hyira wɔn a wɔwɔ ne mu gyidi na wɔhwehwɛ bammɔ wɔ ne nkyɛn no. Mihui sɛ, sɛ mesesa me bra a, Onyankopɔn begye me atom na wahyira me. Mibehui sɛ Bible ka nsɛm pii tia nsawe. Asɛm a ɛwɔ 2 Korintofo 7:1 no wuraa me koma mu. Ɛhɔ asɛm no kyerɛ sɛ ‘yɛnhohoro yɛn ho mfi fĩ nyinaa ho.’ Enti mifii ase gyaee me subammɔne no. Ahyɛase no de, na m’abufuw reyɛ kɛse. Ne nyinaa mu no Cati ammrɛ me ho da; ɔkɔɔ so boaa me.
Nea ekowiei ara ne sɛ, migyaee m’adwuma efisɛ na nneɛma pii piapia me wɔ hɔ sɛ menkɔnom nsa ne sigaret bio. Bere a migyaee adwuma no, me sika so tewee paa, nanso minyaa bere pii de suaa Bible. Saa bere no paa na mifii ase kɔɔ m’anim wɔ Onyankopɔn som mu. Biribi kakra a menya ama Cati biara, na ɔnkasa ho. M’ani sɔ mmoa a ɔyɛɛ me no paa.
Mifii ase ne Adansefo no bɔe paa. Wɔboaa me ma mihui sɛ me nhomanim a ɛnkɔ akyiri no ntumi nsiw me kwan wɔ Yehowa som ho. Wɔma mihui sɛ, sɛnea mepɛ sɛ mede me koma nyinaa som Yehowa no yɛ ade kɛse wɔ n’ani so. Ɔdɔ ne biakoyɛ a me ne me yere ne me mma hui wɔ Kristofo asafo no mu no, ɛkaa yɛn koma yiye. Ná yenhuu asomdwoe a ɛte saa wɔ baabiara da. Me nso mebɔɔ asu December 2004.
Mahu sɛ Yehowa asɛm a ɛwɔ Yesaia 48:17 no yɛ nokware. Ɛhɔ se: “Me Yehowa, mene wo Nyankopɔn, nea ɔkyerɛ wo ade a eye ma wo.” Masesa ama me maame ne me nua no ani agye paa, enti seesei wɔn nso wɔresua Bible. M’afipamfo mpo ani agye sɛ masesa me suban na anigye aba yɛn fie.
Mewɔ yere a ɔdɔ Onyankopɔn na obu me sɛ ne hokafo ne n’adamfo a ogye no di. Ɛwom, minnim me papa, nanso Bible no ama mahu sɛnea mɛtete me mmabarima baasa no. Wobu me. Nea ehia koraa ne sɛ wohu Yehowa sɛ obi a ɔwɔ hɔ paa, na wɔdɔ no yiye nso.
“Ɛwom, minnim me papa, nanso Bible no ama mahu sɛnea mɛtete me mmabarima baasa no”
Meda Yehowa ase paa sɛ, amanehunu a mefaa mu wɔ me mmofraberem nyinaa akyi no, wadom me ama mabɛyɛ ɔbarima a ɔwɔ anigye.
“Mebɛyɛɛ Ababaa Nuɔdenfo a Ɔwɔ Koko Bɔne.”—NABIHA LAZAROVA
ƆMAN A OFI MU: BULGARIA
TEBEA A NA ƆWOM: NÁ ƆTƆN NNUBƆNE
Wɔwoo me wɔ Sofia, Bulgaria. Ná m’abusuafo nyɛ asikafo nanso na wɔwɔ wɔn biribi di. Me papa guan gyaw me ne me maame ne me nuanom. Saa bere no, na madi mfe asia, na asɛm no tumii yɛn paa maa awerɛhow hyɛɛ me so. Metee nka sɛ meyɛ nipahunu a obiara mfa me nyɛ hwee. Migu so renyin no, saa atenka no ma metew atua. Mebɛyɛɛ ababaa nuɔdenfo a ɔwɔ koko bɔne.
Midii mfe 14 no, na mitumi guan fi fie. Ná miwiawia me maame ne me nananom sika. Esiane sɛ na mewɔ koko bɔne nti, na metaa nya asɛm wɔ sukuu mu. Ɛno nti mfe kakraa bi ntam no, mekɔɔ sukuu mmiako mmiako anum. Bere a aka mfe abiɛsa ama mawie sukuu agye abodin krataa no, migyaee sukuu. Mibuu brabɔne kɔɔ akyiri. Menom sigaret ne wii maa afei de mannya bi annom a mintumi ntena. Mewee nsa, na apontow de, na mefa no kwa. Afei nso mifii ase tɔn nnubɔne. Ná minhu nea enti a ɛsɛ sɛ nnipa ba wiase behu amane na wowu. Ɛno nti, sɛ ade kye me nko ara de a, ɛsɛ sɛ migye m’ani sɛnea metumi biara.
Afe 1998 a na madi mfe 24 no, na mede nnubɔne rekɔ baabi akɔtɔn, nanso wɔkyeree me wɔ São Paulo, Brazil wimhyɛn gyinabea. Wodii m’asɛm de me too afiase mfe anan.
Afe 2000 no, Yehowa Adansefo fii ase baa afiase hɔ bɛkaa asɛm no nnawɔtwe biara. Ná Ɔdansefo biako a ne din Marines tew n’anim ma me paa. Ɔboaa me ma minyaa adwene sɛ mɛyere me ho asua Bible. Meka kyerɛɛ nneduafo a wɔwɔ hɔ sɛ wɔnkyerɛ me nnipa ko a Yehowa Adansefo yɛ, efisɛ na mentee wɔn ho asɛm da. Ɛyɛɛ me nwonwa sɛ wɔn mu pii anka asɛm papa biara amfa wɔn ho. Biako ka kyerɛɛ me sɛ metumi akɔ asɔre biara a mepɛ nanso Yehowa Adansefo de, dabi. Nea ɔkae no ma meyere me ho denneennen sɛ mehu nea enti nkurɔfo mpɛ Adansefo no asɛm saa. Mibehui sɛ wɔn som no na ɛyɛ nokware nti na nkurɔfo tan wɔn saa no. Bible koraa aka sɛ obiara a ɔpɛ sɛ odi Yesu akyi pɛpɛɛpɛ no, nkurɔfo bɛtaa no.—2 Timoteo 3:12.
Saa bere no mu ara na wɔma mekɔyɛɛ adwuma wɔ mpanyimfo a wɔhwɛ afiase hɔ no ɔfese ahorow no mu. Da koro bi, mihuu Ɔwɛn-Aban ne Nyan! nsɛmma nhoma * dedaw bi sɛ egu nnaka mu wɔ adekoradan no mu. Mefaa nsɛmma nhoma no kɔɔ afiase dan no mu kɔkenkanee. Bere a merekenkan no, na mete nka sɛ obi a ɔnam anhweatam mu a wahu nsu pa a obetumi anom bi. Ná mewɔ bere paa, enti da biara da na misua Bible nnɔnhwerew pii.
Da koro, wɔfrɛɛ me kɔɔ ɔfese bi wɔ afiase hɔ. Ná ɛyɛ me sɛ wɔrebeyi me afi afiase, enti mesesaw me nneɛma kakra a ɛwɔ hɔ na me ne nneduafo no dii nkra tuu mmirika kɔɔ ɔfese hɔ. Nanso mikoduu hɔ no, wɔka kyerɛɛ me sɛ wɔabɔ me kwaadu foforo sɛ wɔahu nkrataa bi wɔ me din mu a ɛnyɛ papa. Ɛno nti wɔsan de mfe abien kaa ho.
Mfiase no, asɛm no bubuu me pasaa. Nanso akyiri yi midwen ho hui sɛ biribi resɛe no, na ne yiye mu. Ná masua nneɛma pii afi Bible mu, nanso me komam paa de, na mepɛ sɛ, sɛ mifi afiase hɔ a mekɔtoa m’abrabɔ dedaw no so. Ná mihia bere pii a mede bɛsesa.
Eduu baabi no, ɛyɛɛ me sɛ ɛbɛyɛ den sɛ Onyankopɔn begye me atom ama masom no. Nanso midwinnwen nsɛm bi ho te sɛ asɛm a ɛwɔ 1 Korintofo 6:9-11 no. Asɛm a ɛwɔ hɔ no ma yehu sɛ asomafo no bere so no, ansa na ebinom rebɛyɛ Kristofo abɛsom Yehowa no, na wɔyɛ akorɔmfo ne asabofo ne apoobɔfo. Nanso Yehowa boaa wɔn ma wotumi sesae. Wɔn asɛm no hyɛɛ me nkuran paa.
Suban no bi gyae anyɛ den amma me. Nnubɔnenom sei, anyɛ den pii sɛ megyae. Nanso sigaretnom de, na ne gyae nna fam koraa. Mepere pere peree no, edi boroo afe biako ansa na meretumi agyae. Ade biako a ɛboaa me ne sɛ, misua hui sɛ sigaret tumi sɛe yɛn nipadua, nanso mpae a mebɔɔ Yehowa daa no na ɛboaa me kɛse paa ma migyaee.
“Mihui sɛ manya agya mu Agya paa; agya a ɔrennyaw me da!”
Afei de na merebɛn Yehowa, enti atenka a bere a me papa poo yɛn no minyae sɛ me so nni mfaso no fii me mu nkakrankakra. Asɛm a ɛwɔ Dwom 27:10 no kaa me koma paa. Ɛhɔ ka sɛ: “Sɛ me papa ne me maame mpo gyaw me a, Yehowa de, obegye me.” Mihui sɛ manya agya mu Agya paa; agya a ɔrennyaw me da! Afei de na manya botae wɔ m’asetenam. Woyii me fii afiase asram asia akyi no, wɔbɔɔ me asu April 2004 ma mebɛyɛɛ Yehowa Dansefo.
Seesei m’ani gye. Magyae subammɔne no. Sesa a masesa nti mewɔ apɔwmuden, na minni awerɛhow te sɛ bere a na meyɛ ababaa no. Manya aware pa, na me ne Yehowa, m’Agya a ɔwɔ soro no nso wɔ ayɔnkofa a ɛyɛ den. Manya agyanom, ɛnanom, nuabarimanom ne nuabeanom bebree wɔ Yehowa asafo no mu. (Marko 10:29, 30) Meda asafo no mufo ase sɛ wohuu biribi pa wɔ me mu a na me mpo minnim.
Ɛtɔ da bi na mekae nneɛma bɔne a mayɛ atwam no a, m’adwene bu me fɔ. Nanso Onyankopɔn bɔ a wahyɛ sɛ wiase foforo no mu no, ‘yɛrenkae’ nneɛma bɔne a ɛte saa bio no ma minya awerɛkyekye. (Yesaia 65:17) Mfaso a manya afi nea atwam no so ne sɛ ɛma minya atenka ma wɔn a wɔwɔ saa tebea no mu. Sɛ mefa no saa a, ɛnde mɛka sɛ nea mayɛ atwam no aboa me. Enti nkurɔfo bi te sɛ akɔwensafo ne nsɛmmɔnedifo anaa wɔn a wɔnom nnubɔne sei, sɛ mereka asɛmpa no a, ɛnyɛ me den sɛ mɛka bi akyerɛ wɔn, efisɛ mimmu wɔn fɔ. Migye di yiye paa sɛ, sɛ me mpo matumi asesa a, obiara nso betumi asesa.
^ nky. 29 Yehowa Adansefo na wotintim.